beddelidda jinsiga iyo isbadalka | USAHello | USAHello
beddelidda jinsiga waa hawl caafimaad oo kasta oo caawiya dadka transgender dhigma ay galmo jirka jinsigooda. Haddii aad rabto in aad bedesho jinsiga, waxaad u baahan doontaa inaad hesho dhakhtar takhasus u leh kaas oo kaa caawin kara. Baro laabteen, therapy hormone iyo qalliinka doorasho ee beddelidda jinsiga.
dadka Trans meel kasta adeegyada ka heli kartaa, ma ahan oo keliya leh transgender. Waayo, adeegyada aasaasiga ah, sida calool xanuun ama gacanta ka jabay, dhakhtar kasta ama isbitaalka aad daweyn karaan. isbitaalka ama dhakhtarka laga yaabaa in kuu soo diri takhasus leh haddii aad rabto in aad gudbaan oo xiiso u beddelidda jinsiga.
Isbadalka waa marka uu qofku trans bilaabo la beddelo si ay u dhigma jinsigooda. Waa kala duwan ee qof walba. Waxaad ka bedeli kartaa magacaaga, ID iyo magac- (isaga ama iyada). Waad beddeli kartaa muuqaalka, dharka, ama qurxiyo. Waxaad heli kartaa daawayn caafimaad iyo hormoonnada. Waxay noqon kartaa habka dheer ama gaaban. Marna lagama daaho in la kala guurka iyo qof kasta oo ka dhigi kartaa t hier doorasho gaar ah oo ku saabsan beddelidda jinsiga,
isbadalka Caafimaad ahaan waa marka uu qofku trans helo daaweyn caafimaad si sifooyinka galmada (xubnaha taranka, jirka, codka) dhigma aqoonsiga jinsiga ay. Waad awoodaa badan oo ku saabsan laabteen bartaan.
Daweynta hormoonka waa marka dadku trans qaataan daawada maalin kasta hormone. Ma aha qalliinka. Waxaa badala muuqaalkaaga, sida aad u koraan timaha, codkaaga, iyo in ka badan. Waxay dareemi kartaa sida qaangaadhnimada, taas oo ah marka jirka uu soo marayo isbedel marka aad da'yar. Tani waa waxtar u leh dadka trans oo aan la aqoonsan yahay ee ay jinsiga.
Daweynta hormoonka for laabteen si ay u noqdaan haween ah
Marka laabteen si ay u noqdaan dumar ah, nin estrogen qaadataa. Estrogen waxay keeni kartaa maqaarka si ay u noqdaan khafiif ah oo ay soo saaraan saliid yar. baruurta jirka guuro meelaha kala duwan ee jidhka, sida Laabta ku sugan iyo miskaha. timaha Body guud ahaan noqon doontaa khafiif ah oo la dareemi karo in ka yar.
Daweynta hormoonka for laabteen si ay u noqdaan lab
Marka laabteen si ay u noqdaan lab a, qof dumar ah qaadataa testosterone. Testosterone keeni kartaa maqaarka si ay u noqdaan dhumuc weyn oo ka badan kuwa saliida. Dadka qaar waxay yeeshaan finan ay wajiga iyo jidhka. Naasaha laga yaabaa inay noqdaan yar yar iyo jirkaaga horumariyo doonaa muruqa more. Testosterone dhigi doonaa codkaaga timaha hoose oo dheeraad ah si ay u koraan on jirkaaga noqday.
Dhibaatooyinka ay keento dawaynta hormone
Dad badan ayaa la kulmi karaan waxyeelo xun. Dadka qaar ayaa laga yaabaa in dhibaato ay maqaarka ama u dhawdihiin inaad miisaanka. Qaar kalena waxay dareemi karaan daal ama laga yaabo in ay leeyihiin dhibaatooyinka caloosha. Qaar ka mid ah waxay leeyihiin waxyeelo maskaxeed sida murugada ama niyadda bed. Xusuusnow in waxyeelo xun waa caadi. Dad badan oo waxaa laabteen caawimaad weydiiso dhakhtar ama xirfadle caafimaadka dhimirka.
Muddada daaweynta hormone
Daweynta hormoonka waa kala duwan ee qof walba. Dadaada, caafimaadka, iyo isbedelka gobolka maskaxda sida badan hormoonnada idiin qaadan doonaa iyo muddada. Dadka qaarkood waxay doortaan in ay hormoonnada qaadan weligeedba. Waayo, dadka intooda badan, waxa ay qaadataa 1 in 2 sano si ay u arkaan isbedel weyn ay jidhka.
Waxaa muhiim ah in dhakhtarkaaga si joogto ah u tagaan marka la qaadanayo hormoonnada waayo, beddelidda jinsiga. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan therapy hormone loogu tala galay dumarka iyo therapy hormone waayo, nimankii aad.
qaliin Gender-adkaynaya waxaa loogu talagalay dadka trans kuwaas oo doonaya inay baddalaan jirka. qalliin kala duwan bedeli kartaa qeybaha jirka, sida ku daray ama iska naasaha ama xiniinyaha. nin Trans dooran karaan in xubnaha taranka ay gudaha saaray. qalliin Kuwani waa qaali waxaana laga yaabaa in aan la caymiska. Qaar badan oo ka mid ah qalliin kuwanu waa khatar oo dhan ma waxaa la samayn karaa hal mar.
Dadka qaarkood waxay doortaan in ay qalliin wajiga. Labka laabteen in dumar dooran laga yaabaa in ay dhuunta ayaa xiiray. hawomareen waa bararto ee bogga hore ee qoorta waa weyn ee ragga. qalliin kale ee nin ka mid ah isagoo walaac ku sunnayaasha iyo hoos qoordiidka. Haweenka laabteen si lab laga yaabaa in aad hesho maqaar-galaha garka ah. Qaar kale waxay heli implants daanka ama qalliin sanka. Ma jiro hab caadiga ah si ay u gudbaan. Waxa aad rabto in aad eegto sida ay tahay aad doorato.
Sidee baan u heli khayraadka beddelidda jinsiga?
Khuburada caafimaadka isku raacsan yihiin in beddelidda jinsiga waxaa muhiim u ah dadka trans. daryeel-guurka la xiriira daboolo qaar ka mid ah caymiska dadweynaha iyo waxa la siiyaa lacag la'aan ah rugaha qaar ka mid ah. Waxaad ka heli kartaa kheyraadka LGBT on FindHello. Ku qor cinwaanka ama meesha aad. Markaas dooran “Daryeelka Caafimaadka iyo Caafimaadka Maskaxda.” Marka liiska khayraadka muuqan, waxaad dooran kartaa “Nooca.” Dooro LGBTQI.
marka la eego jinsi
takoorka jinsi iyo xuquuqda shaqo
xuquuqda jinsi iyo aqoonsiga
LGBT: lesbian, gay, bulshooyinka labeebka iyo
Trans Resources Waxbarashada Ardayga
Centerlink Community of Xarumaha LGBT
Caafimaadka iyo ladnaanta hage loogu talagalay LGBTQ ah + bulshada ka Drugwatch.com